ဂရင်းလန်ကျွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဂရင်းလန်းကျွန်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဂရင်းလန်ကျွန်းသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ အကြီးဆုံးကျွန်း ဖြစ်၏။ ကမ္ဘာ့မြောက်ဖျား အာတိတ်စက်ဝိုင်းအတွင်းသို့ တစ်ကျွန်းလုံးလိုလို ကျရောက်နေသည်။ ဒေဗစ်ရေလက်ကြားနှင့် ဗက်ဖင်ပင်လယ်အော်တို့သည် ဂရင်းလန်ကျွန်းအား မြောက် အမေရိကတိုက်နှင့် ပိုင်းခြား၍ထားလေသည်။
(အင်္ဂလိပ်: "You Our Ancient Land")
Song: "Nuna asiilasooq" (Greenlandic)
(အင်္ဂလိပ်: "The Land of Great Length")[မှတ်စု ၁]
ဂရင်းလန်ကျွန်း၏ တည်နေရာ (red)
the Kingdom of Denmark အတွင်း (red and beige)
၁၄ ဇန်နဝါရီ ၁၈၁၄
၁ မေ ၁၉၇၉
၂၁ ဇွန် ၂၀၀၉
ဒိန်းမတ်၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် အခြား
အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး
၂,၁၆၆,၀၈၆ km2 (၈၃၆,၃၃၀ sq mi)
• ရေ (%)
၃,၇၀၀ မီတာ (၁၂၁၀၀ ပေ)
• ၂၀၂၀ ခန့်မှန်းခြေ
၀.၀၂၈/km2 (၀.၁/sq mi)
$၁.၈ ဘီလီယံ (not ranked)
high · ၆၁
ဂရင်းလန်ကျွန်း၏ ဧရိယာမှာ စတုရန်းမိုင် ၈၄ဝဝဝဝ မျှ ဖြစ်သည်။ အလျားမှာ မိုင် ၁၆ဝဝ ခန့်၊ အနံမှာ မိုင် ၇ဝဝ ကျော်ခန့် ဖြစ်သည်။ တစ်ဝက်ကျော်မျှသော မြေမျက်နှာပြင်ကို ထုထယ်ကြီးမားသော ရေခဲပြင်ဖုံးလွှမ်းနေသောကြောင့် တောင် ထိပ်များသာလျှင် ကွက်ကြား၊ ကွက်ကြားအားဖြင့် ရေခဲပြင် ပေါ်မှ ထိုး၍ ထွက်နေသည်။ ထိုရေခဲပြင်သည် နှစ်စဉ်တန်ချိန် ကုဋေ ၁ဝဝ ကျော်မျှလေးသော ရေခဲများကို ပင်လယ်ထဲသို့ ယူဆောင်ခဲ့သဖြင့် ပင်လယ်၌ မျောနေသော ရေခဲတောင်ကြီး များသည် ခရီးသွားသင်္ဘောများကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်သည်။
ဂရင်းလန်၏ ကမ်းရိုး တန်းမှာ ကျောက်ထူထပ်၍ ကုန်းမြေတွင်းသို့ ရှည်လျားစွာ ဝင်နေသော ဖီအော့ခေါ် ရေမြောင်းကြီးများဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိ သည်။ ဂရင်းလန်၏အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေ၌ ရေအေးစီးကြောင်းတစ်ခု ဖြတ်၍ စီးနေသည်။ ထို့ကြောင့် လူမနေနိုင်လောက်အောင် အအေးလွန်ကဲသည်။ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေမှာ အနည်းငယ်နွေး သဖြင့်၊ သစ်ပင်ပန်းမာလ်များ စိုစိုပြည်ပြည်ရှိ၏။ ၁၉၅၁ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဂရင်းလန်တွင် လူပေါင်း ၂၂Ý၅၈၁ ခန့် နေထိုင်သည်။ ယခုအခါဂရင်းလန်းကျွန်းတွင်နေထိုင်သူ 60000 ကျော်ခန့်ရှိသည်။ ထိုလူဦးရေထဲတွင် ဂရင်းလန်ကျွန်းသား အမြောက် အမြား ပါဝင်၍ ဒိန်းလူမျိုး အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ကျွန်းသား များမှာ အအေးဒဏ်ခံနိုင်သော အက်စကီးမိုးများ ဖြစ်ကြ၍ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ဆီးနှင်းထဲတွင် နေထိုင်ကြသည်။
ထိုကျွန်းသားတို့သည် ကူးသန်းသွားလာရေး အတွက် ခွေးဆွဲစွပ်ဖားနှင့် ဖျံရေဖြင့်ချုပ်လုပ်သော ကယက်ခေါ် လောင်းလှေများကို အသုံးပြုကြသည်။ အလုပ်အကိုင်မှာ တံငါ အလုပ်ပင် ဖြစ်၏။ သို့သော် မြေခွေး၊ ဝက်ဝံ အစရှိသော သားကောင်များကို ဖမ်းဆီးခြင်းဖြင့်လည်း အသက်မွေးမြူကြ သည်။
ရှေးအခါက ဂရင်းလန်ကျွန်းကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရက ကိုလိုနီစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက် နေ့တွင် ယင်းကိုလိုနီစနစ်ကို ဖျက်သိမ်း၍ ဂရင်းလန်ကျွန်းကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံထဲသို့ သွတ်သွင်းခဲ့လေသည်။ ဂရင်းလန်ကျွန်း၌ မဲဆန္ဒနယ် ၂ နယ်ရှိရာ တစ်နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကျကို ဒိန်းမတ်လွှတ်တော်သို့ စေလွှတ်ခွင့်ရှိသည်။
↑ ဂရင်းလန်ဘာသာစကားသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စ၍ ဂရင်းလန်၏ ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သည်။
↑ As of 2000: ၄၁၀,၄၄၉ km2 (၁၅၈,၄၇၅ sq mi) ice-free; ၁,၇၅၅,၆၃၇ km2 (၆၇၇,၈၅၅ sq mi) ice-covered.
↑ 03EM/01.25.01-50 Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår fremsætter Landsstyret beslutning om Grønlands။ Government of Greenland (7 October 2003)။
↑ ၂.၀ ၂.၁ (in ဒိန်းမတ်) TV2Nyhederne – "Grønland går over til selvstyre" TV2Nyhederne (TV2News) – Ved overgangen til selvstyre, er grønlandsk nu det officielle sprog. Retrieved 22 January 2012.
↑ (in ဒိန်းမတ်) Law of Greenlandic Selfrule Archived 8 February 2012 at the Wayback Machine. (see chapter 7)
↑ Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater (9 October 1997)။
↑ Population and Population Growth 1901-2020။ Statistical Greenland။
↑ Greenland in Figures 2013 (PDF)။ Greenland in Figures။ Statistics Greenland။ ISBN 978-87-986787-7-9။ ISSN 1602-5709။ 21 September 2013 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။2September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Avakov၊ Aleksandr Vladimirovich (2012)။ Quality of Life, Balance of Powers, and Nuclear Weapons (2012): A Statistical Yearbook for Statesmen and Citizens။ Algora Publishing။ p. 51။ ISBN 978-0-87586-892-9။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂရင်းလန်ကျွန်း&oldid=707017" မှ ရယူရန်
၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။